Coronavirus ကွောငျ့ ကမ်ဘာတဈဝှမျးမှာ ဘာတှပွေောငျးလဲသှားသလဲ? – SoShwe
Home/LifeStyle/Coronavirus ကွောငျ့ ကမ်ဘာတဈဝှမျးမှာ ဘာတှပွေောငျးလဲသှားသလဲ?
Coronavirus ကွောငျ့ ကမ်ဘာတဈဝှမျးမှာ ဘာတှပွေောငျးလဲသှားသလဲ?
So Shwe May 28, 2020	LifeStyle Leaveacomment
လူသားတှရေဲ့အသကျကို လူသတျလကျနကျတှမေသုံးဘဲ ရောဂါပိုးနဲ့တငျ နှုတျယူသှားတဲ့ ကပျရောဂါဆိုးကွီးကွောငျ့ ကမ်ဘာပျေါမှာဘာတှပွေောငျးလဲသှားသလဲ? ဆိုတဲ့ မေးခှနျးကို လိုရငျးတိုရှငျး အဖွပေေးရရငျတော့ လူသားတှရေဲ့ ကနျြးမာရေးကို အလေးထားလာတဲ့အသိပါ။ အရငျကတော့ ပေါ့ပကျြပကျြနကေောငျးနပေမေယျ့ အခုခြိနျမှာတော့ အစှမျးကုနျ အလေးထားလာတာပဲဖွဈပါတယျ။
လူတှကေ အဆိုပါကပျရောဂါဆိုးကွီးကို တိုကျထုတျနိုငျဖို့အတှကျ ကိုယျတတျနိုငျတဲ့နညျးနဲ့ ကာကှယျနကွေတာတှကေို အောကျမှာဖျောပွထားပေးပါတယျ။
၁။ စားသောကျဆိုငျတဈခုက အစားအသောကျဝယျယူသူတှကေို သနျ့စငျခနျးသုံးတဈရှူးတဈလိပျစီ လကျဆောငျပေးတယျ။
၂။ Starbuckက စားသုံးသူတှကေို အိမျမှာပဲစားသောကျစလေိုတဲ့အတှကျ ဆိုငျခနျးအတှငျး စားပှဲထိုငျခုံတှကေို သိမျးထားလိုကျပါတယျ။
၃။ ဓါတျလှကေားထဲမှာ ကိုယျသှားလိုတဲ့အထပျကို သှားကွားထိုးတံလေးကို အသုံးပွုပွီး နှိပျစတေယျ။
၄။ စာအိတျကို ကျောနဲ့ကပျထားကွောငျး အသိပေးတယျ။
၅။ တဈဦးနဲ့တဈဦး မနီးကပျဘဲ ခှာပွီးရပျဖို့ ညှနျပွထားတဲ့ ကုနျစုံဆိုငျ။
၆။ Chipotle စားသောကျဆိုငျကလညျး စားသုံးသူတှကေို ခှာရပျဖို့ ညှနျပွထားပါတယျ။
၇။ အောကျမှာဖျောပွထားတဲ့ ဓါတျပုံထဲက လူတှကေတော့ ကိုယျ့အသိစိတျနဲ့ကိုယျ ခှာပွီးရပျနကွေတာပဲ ဖွဈပါတယျ။
၈။ စားသုံးသူတှကေို နီးကပျစှာမထိုငျစဖေို့အတှကျ နရောပွုလုပျထားပေးတဲ့ စားသောကျဆိုငျ။
၉။ ပေါငျမုနျ့တှကေို နှဈထပျထုပျထားပေးတဲ့ ကုနျစုံဆိုငျ။
၁၀။ ကိုယျဝတျပွုမယျ့နရောမှာခငျးဖို့ တဈခါသုံးစက်ကူတှေ ထားပေးတဲ့ အစ်စလာမျဝတျပွုကြောငျး။
၁၁။ စားသုံးသူတှရေဲ့နာမညျတှနေဲ့ ဆကျသှယျနိုငျမယျ့လိပျစာကို တောငျးခံခဲ့တဲ့ ကျောဖီဆိုငျ။
၁၂။ ဓါတျလှကေားစီးသူတှကေို တဈယောကျနဲ့တဈယောကျ ကြောခိုငျးပွီးရပျဖို့ ညှနျထားပေးတာမြိုး။
၁၃။ အသီးအရှကျတှကေို သီးသနျ့အိတျတှနေဲ့ ထုပျပိုးပေးထားတဲ့ အသုပျစားသောကျဆိုငျ။
၁၄။ အဘိုးအဘှားတှကေို ခပျခှာခှာထိုငျစပွေီး Bingo Nights လေး ဆကျလကျပွုလုပျပေးနတေဲ့ ဘိုးဘှားရိပျသာ။
၁၅။ စြေးဝယျသူနဲ့ ငှကေိုငျဝနျထမျးကွားမှာ ပလကျစတဈအကာနဲ့ ကာထားပေးတဲ့ ကုနျစုံဆိုငျ။
၁၆။ ခရီးသညျနဲ့ ပလကျစတဈတံတားခွားထားတဲ့ တက်ကစီမောငျးသူ။
၁၇။ စြေးဝယျသူတှကေို ဆိုငျထဲမဝငျခငျ လကျသနျ့ဆေးရညျသုံးဖို့ လကျသနျ့ဆေးထားပေးတဲ့ ကုနျစုံဆိုငျ။
၁၈။ ခွထေောကျကိုအသုံးပွုပွီး တံခါးဖှငျ့လို့ရအောငျပွုလုပျပေးထားတဲ့ ရုံးခနျး။
၁၉။ ဝယျယူသူတှေ လိုအပျတဲ့ ပစ်စညျးတှကေုနျနပွေီဖွဈကွောငျး အသိပေးထားတဲ့ ကုနျစုံဆိုငျ။
Coronzvirus ကြောင့် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှာ ဘာတွေပြောင်းလဲသွားသလဲ?
လူသားတွေရဲ့အသက်ကို လူသတ်လက်နက်တွေမသုံးဘဲ ရောဂါပိုးနဲ့တင် နှုတ်ယူသွားတဲ့ ကပ်ရောဂါဆိုးကြီးကြောင့် ကမ္ဘာပေါ်မှာဘာတွေပြောင်းလဲသွားသလဲ? ဆိုတဲ့ မေးခွန်းကို လိုရင်းတိုရှင်း အဖြေပေးရရင်တော့ လူသားတွေရဲ့ ကျန်းမာရေးကို အလေးထားလာတဲ့အသိပါ။ အရင်ကတော့ ပေါ့ပျက်ပျက်နေကောင်းနေပေမယ့် အခုချိန်မှာတော့ အစွမ်းကုန် အလေးထားလာတာပဲဖြစ်ပါတယ်။
လူတွေက အဆိုပါကပ်ရောဂါဆိုးကြီးကို တိုက်ထုတ်နိုင်ဖို့အတွက် ကိုယ်တတ်နိုင်တဲ့နည်းနဲ့ ကာကွယ်နေကြတာတွေကို အောက်မှာဖော်ပြထားပေးပါတယ်။
၁။ စားသောက်ဆိုင်တစ်ခုက အစားအသောက်ဝယ်ယူသူတွေကို သန့်စင်ခန်းသုံးတစ်ရှူးတစ်လိပ်စီ လက်ဆောင်ပေးတယ်။
၂။ Starbuckက စားသုံးသူတွေကို အိမ်မှာပဲစားသောက်စေလိုတဲ့အတွက် ဆိုင်ခန်းအတွင်း စားပွဲထိုင်ခုံတွေကို သိမ်းထားလိုက်ပါတယ်။
၃။ ဓါတ်လှေကားထဲမှာ ကိုယ်သွားလိုတဲ့အထပ်ကို သွားကြားထိုးတံလေးကို အသုံးပြုပြီး နှိပ်စေတယ်။
၄။ စာအိတ်ကို ကော်နဲ့ကပ်ထားကြောင်း အသိပေးတယ်။
၅။ တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး မနီးကပ်ဘဲ ခွာပြီးရပ်ဖို့ ညွှန်ပြထားတဲ့ ကုန်စုံဆိုင်။
၆။ Chipotle စားသောက်ဆိုင်ကလည်း စားသုံးသူတွေကို ခွာရပ်ဖို့ ညွှန်ပြထားပါတယ်။
၇။ အောက်မှာဖော်ပြထားတဲ့ ဓါတ်ပုံထဲက လူတွေကတော့ ကိုယ့်အသိစိတ်နဲ့ကိုယ် ခွာပြီးရပ်နေကြတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
၈။ စားသုံးသူတွေကို နီးကပ်စွာမထိုင်စေဖို့အတွက် နေရာပြုလုပ်ထားပေးတဲ့ စားသောက်ဆိုင်။
၉။ ပေါင်မုန့်တွေကို နှစ်ထပ်ထုပ်ထားပေးတဲ့ ကုန်စုံဆိုင်။
၁၀။ ကိုယ်ဝတ်ပြုမယ့်နေရာမှာခင်းဖို့ တစ်ခါသုံးစက္ကူတွေ ထားပေးတဲ့ အစ္စလာမ်ဝတ်ပြုကျောင်း။
၁၁။ စားသုံးသူတွေရဲ့နာမည်တွေနဲ့ ဆက်သွယ်နိုင်မယ့်လိပ်စာကို တောင်းခံခဲ့တဲ့ ကော်ဖီဆိုင်။
၁၂။ ဓါတ်လှေကားစီးသူတွေကို တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် ကျောခိုင်းပြီးရပ်ဖို့ ညွှန်ထားပေးတာမျိုး။
၁၃။ အသီးအရွက်တွေကို သီးသန့်အိတ်တွေနဲ့ ထုပ်ပိုးပေးထားတဲ့ အသုပ်စားသောက်ဆိုင်။
၁၄။ အဘိုးအဘွားတွေကို ခပ်ခွာခွာထိုင်စေပြီး Bingo Nights လေး ဆက်လက်ပြုလုပ်ပေးနေတဲ့ ဘိုးဘွားရိပ်သာ။
၁၅။ ဈေးဝယ်သူနဲ့ ငွေကိုင်ဝန်ထမ်းကြားမှာ ပလက်စတစ်အကာနဲ့ ကာထားပေးတဲ့ ကုန်စုံဆိုင်။
၁၆။ ခရီးသည်နဲ့ ပလက်စတစ်တံတားခြားထားတဲ့ တက္ကစီမောင်းသူ။
၁၇။ ဈေးဝယ်သူတွေကို ဆိုင်ထဲမဝင်ခင် လက်သန့်ဆေးရည်သုံးဖို့ လက်သန့်ဆေးထားပေးတဲ့ ကုန်စုံဆိုင်။
၁၈။ ခြေထောက်ကိုအသုံးပြုပြီး တံခါးဖွင့်လို့ရအောင်ပြုလုပ်ပေးထားတဲ့ ရုံးခန်း။
၁၉။ ဝယ်ယူသူတွေ လိုအပ်တဲ့ ပစ္စည်းတွေကုန်နေပြီဖြစ်ကြောင်း အသိပေးထားတဲ့ ကုန်စုံဆိုင်။
Previous Coronavirus ကိုတိုကျထုတျရငျး ခကျခဲတဲ့အခြိနျတှမှော ပြျောပြျောနတေတျကွတဲ့ ကနျြးမာရေးဝနျထမျးမြား။
Next လျိုငျလီတိုကျစဈမှူးတဈဦးကို လီဗာပူး၊ ရီးရဲယျမကျဒရဈတို့နဲ့အပွိုငျကွိုးစားမညျ့ ယူနိုကျတကျ။